Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, January 15, 2010 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, January 15, 2010 Labels: ရသစာစုများ
တစ်နေ့……. ဆယ်နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် ရေခဲမုန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးထဲကို ၀င်လာတယ်.. စားပွဲတစ်လုံးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက် ပြီးတော့ စားပွဲထိုး အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးပါတယ်…
“ ရေခဲမုန့် တစ်ခုကို ဘယ်လောက်ပါလဲ ခင်ဗျာ..”
အမျိုးသမီးက ၇၅ ဆင့်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်.. ကောင်လေးက သူ့လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေကို ရေတွက်လိုက်ပြီးတော့ အသေး ဆိုရင်ရော တစ်ခု ဘယ်လောက် ပါလဲလို့ ထပ်မေးပါတယ်.. ဒီအခါ စားပွဲထိုးအမျိုးသမီးက စိတ်မရှည်စွာနဲ့ ၆၅ဆင့်လို့ ဆောင့်ဆောင့် အောင့်အောင့် ပြန်ဖြေပါတယ်… ကောင်လေးက ဒါဆို ကျွန်တော် ခွက်သေးတစ်ခု ဘဲယူပါမယ် ပြောပြီး ကျသင့်ငွေ ၆၅ ဆင့်ကို ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်.. … ရေခဲမုန့် စားပြီးတဲ့အခါ ကောင်လေးက ပြန်ထွက် သွားပါတယ်.. ခုနက စားပွဲထိုး အမျိုးသမီး ရောက်လာပြီး ကောင်လေး စားသွားတဲ့ ခွက်ကို သိမ်းဖို့ ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ၁၀ဆင့် လေးတစ်ဆင့်ကို သူမအတွက် ချန်ထားခဲ့တာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်… အမျိုးသမီးရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ သူမရဲ့ စိတ်မရှည် လိုက်မှုအတွက် စိတ်ထိခိုက်ခြင်း၊ အားနာ ရှက်ရွံ့ခြင်း များနဲ့ပါ….
ကောင်လေးက ရေခဲမုန့်မမှာခင်မှာ စားပွဲထိုး အမျိုးသမီးအတွက် အရင် ထည့်စဉ်းစားပါတယ်.. အမှန်တော့ ကောင်လေး လက်ထဲမှာ ရေခဲမုန့်အကြီး တစ်ခုစာ ပိုက်ဆံအပြည့် ပါပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် ၁၀ဆင့်ကို ပေးဖို့ချန်ပြီးမှ ကျန်ငွေနဲ့ သူ့အတွက် ရေခဲမုန့်ကို မှာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ငယ်ရွယ်သူ ဖြစ်သော်လည်း သူတစ်ပါးအတွက် ထည့်စဉ်းစားတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးက အတုယူစရာ ကောင်းလှ ပါတယ်ရှင်… တစ်ခါတစ်လေမှာ လူကြီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ တွေဟာ ကလေးတွေဆီက သင်ယူစရာတွေ ရှိနေပါသေးလားလို့ သဘော ပေါက် မိပါတယ်.. ကိုယ့်အတွက်ထက် သူတစ်ပါးအတွက် အရင် စဉ်းစား ပေးတတ်တဲ့ သူ့လို လူမျိုးတွေ ချည်းသာဆိုရင် လောကကြီးက ကိုယ်ချင်း စာစိတ် ၊မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့ ခုထက်ပိုပြီး သာယာလှပနေမှာ သေချာပါတယ်နော်…
great motivational blogspot မှ Consideration ကို ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်ရှင်…
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, January 15, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
နည်းပညာ ထွန်းကားလှတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ သတိထားနိုင်မှ တော်ကာကျပါလိမ့်မယ်ရှင်… ဘာလို့ ဒီလို ပြောရတာလဲ ဆိုရင်ဖြင့် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလေး တွေကို ကြည့်ပါ.. ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ လျှို့ဝှက် ဗီဒီယို ကင်မရာလေးတွေပါ.. ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို လျှို့ဝှက်စွာ ယူငင်သွားမဲ့ ကြောက်စရာ သိပ္ပံမျက်လုံးများ ဖြစ်ပါတယ်.. အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး လေးများ၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ အမျိုးသမီးလေးများ ပိုပြီး သတိပြု နိုင်စေရန်အတွက် အသိပေး ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်…
ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် သာမာန် ခါးပတ်ခေါင်းလေး တစ်ခုပါ….သေချာ ကြည့်ရင် ခါးပတ်ခေါင်းမှာ အပေါက်လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်………
ဂက်စ်မီးခြစ်တစ်လုံးကဲ့သို့ အယောင် ဖျောက်ထားတဲ့ ကင်မရာပါ.. ဆေးလိပ်လဲမပါဘဲ မီးခြစ်လေးတစ်ကိုင်ကိုင် ကိုယ့်ရှေ့လာလုပ်နေရင် သတိထားနော်…
ကဲ……….ဒီလို အချိုရည်ဗူးတွေမှာ ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်ပြောရင် ဘယ်သူယုံနိုင်မလဲနော်..
ဒါကတော့ မီးပလပ်ပုံစံ ကင်မရာပါ… ဟော်တယ်တို့ ရုံးခန်းတို့လိုနေရာမျိုးမှာ လျှို့ဝှက် တပ်ဆင်လို့ အကောင်းဆုံးပုံစံပါ.. (သတိပြုကြပါရန်)
မျက်မှန်မှာ တပ်ဆင်တဲ့လျှို့ဝှက်ကင်မရာလေးပါ.. နားကြပ်လေးတောင် ပါသေးတယ်နော်…
ဘောပင်လေးတစ်ချောင်း ချိတ်ထားပြီး လာစကားပြောနေရင်လဲ သတိထားနော်…မဟုတ်တာတွေ လျှောက်မပြောမိစေနဲ့……..
ဦးထုပ်ဆောင်းထားရင်လဲ သတိထားတဲ့… ဦးထုပ်မှာလဲ ကင်မရာ တပ်လို့ရတယ်နော်
ကဲ.. နောက်ဆုံးတော့ လည်စည်း စည်းထားတဲ့သူတောင် သတိထားရမလို ဖြစ်နေပြီ..
အားလုံးဘဲ ဗဟုသုတအတွက်ရော.. သတိပြုကြဖို့အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Original from FunShip Group
picture from yourrockstore.com